Ericsson Media Solutions သည် NAB Show 2018 တွင်အကောင်းဆုံးဆုပြပွဲလေးခုဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ZIXI POWERS 4K UHD Bloomberg တီဗီ + ၀ န်ဆောင်မှု
Lost in Space သည်အမှောင်တွင် Cooke5/ i Lenses နှင့်ခြားနားသည်
Studio Technologies '' Model 207 သည် eSports ကုမ္ပဏီများအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်
Red Giant သည် Adobe After Effects ၌ 3D Normalization အကြောင်းသင်ခန်းစာကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်အခမဲ့ကိရိယာသစ်တစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
EditShare EFS 2020 ၏အထွေထွေရရှိနိုင်မှုကိုကြေငြာခဲ့သည်
Quicklink သည်နောက်ဆုံးပေါ် Quicklink TX (Skype TX) တွင် Microsoft Teams အထောက်အပံ့ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
StreamGear သည် VidiMo Live Streaming Production Solution အတွက် Coveted Award ဆုကိုဂုဏ်ပြုသည်
ဆော်ဒီအသံလွှင့်ဌာနမှဆက်သွယ်မှုပေါင်းစုံပါရှိသည့် Multichannel Networking နှင့် Playout Solution ကိုပေးစွမ်းရန်ဆက်သွယ်မှုကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ
Pliant Technologies က Wireless Intercom Trade-In Promotion ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Globecast သည် Denis Genevois ကို VP Marketing Group သို့လည်းကောင်း၊ Olivier Zankel ကို VP Communication Group သို့တိုးမြှင့်သည်
Konami Creative Centre GINZA သည် eSports Studio အတွက် URSA Broadcasting ကိုအသုံးပြုသည်
ဖျောက်ထားသည့် xR သည် American Idol ၏ Finale တွင် Katy Perry Performance ဖြင့်အသံလွှင့်ဌာန၌ Define Moment ကိုထုတ်လွှင့်သည်
American Horror Story တွင် Lectrosonics အတွက်အသံစိန်ခေါ်မှုသည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်
RSP ပညာရေးက Aspiring ပန်းချီဆရာများကိုကူညီရာတွင်ရေရှည်အောင်မြင်မှုအတွက်လမ်းခင်းပေးသည်
Matrix Biren Bharucha ကို VP၊ Enterprise Sales အဖြစ်ငှားရမ်းသည်
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Ericsson ကမီဒီယာ Solutions ဆုလေး '' Show ကိုအကောင်းဆုံး '' နှင့်အတူ NAB ပြရန် 2018 မှာကြီးမားတဲ့အနိုင်ရ
Ericsson ကမီဒီယာ Solutions ဆုလေး '' Show ကိုအကောင်းဆုံး '' နှင့်အတူ NAB ပြရန် 2018 မှာကြီးမားတဲ့အနိုင်ရ
At NAB ပြရန် 2018, Ericsson က မီဒီယာ Solutions က၎င်း၏ MediaFirst ဗီဒီယိုထုတ်ယူခြင်း suite ကိုများအတွက်ဆုသုံးခု '' Show ကိုအကောင်းဆုံး '' အနိုင်ရဖြင့်၎င်း၏ဆန်းသစ်အဆုံးမှအဆုံးသို့ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူတီဗီပြောင်းလဲဘယ်လိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းရပ်တည်ချက်ဒီဇိုင်းနှင့်သေဒဏ်စီရင်၎င်း၏တီထွင်မှုများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုတွင် 'အကောင်းဆုံးအကြီးစားကျွန်း Booth' 'အဘို့အ NAB အားဖြင့်တင်ပြဆုချီးမြှင့်, (Awesome ကို Cool ပြပွဲ) တစ်ခု ACE အားအနိုင်ရသွားလေ၏။
Arun Bhikshesvaran, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ်, Ericsson က မီဒီယာ Solutions, said: "ဒီတစ်နှစ်ရဲ့ NAB ပြရန် ဒါကြောင့်တစ်ဦး Equity အပေါင်းအဖေါ်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. မီဒီယာဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးအတွက်လာမယ့်ခြေလှမ်းကိုကိုယ်စားပြုအဖြစ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုအထူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MediaFirst ဗီဒီယိုထုတ်ယူခြင်းပလက်ဖောင်းဘို့ငါတို့မကြာသေးမီ Frost & Sullivan ကို Global Market ကခေါင်းဆောင်မှုဆုကိုနှင့်အတူ coupled ဆုစီးရီးအနိုင်ရရှိဤသေတမ်းစာသည်။ ဤရွေ့ကားကိုအနိုင်ပေးကျနော်တို့ကြဖို့အရေးကြီးနေသည်စျေးကွက်-ဦးဆောင်ဖြေရှင်းချက်အမှန်တကယ်ဗီဒီယိုခရီးအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဇာတ်စင်မှာလူတိုင်းအဘို့, နေရာတိုင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှမီဒီယာအတွေ့အကြုံများပေးအပ်ဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ "
MediaFirst Encoding တိုက်ရိုက်ထံမှတစ်ဦး '' အကောင်းဆုံး NAB ၏ '' ဆုချီးမြှင့်အနိုင်ရ လွှမီဒီယာ စံ dynamic range ကို (SDR) / မြင့်မားတဲ့ dynamic range ကို (HDR) ပြောင်းလဲခြင်းနည်းပညာကို၎င်း၏ထူးခြားသောအကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့်အတူ။ ဤသည်ဆု streaming များ၏အနာဂတ်သို့စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်နေကြခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေဖို့အယ်ဒီတာများနှင့်မျှဝေသူများကစစ်ကြောစီရင်သောအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်အသစ်တွေရိုသေ။
MediaFirst Encoding တိုက်ရိုက်တူညီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွင်းအကြောင်းအရာ SDR နှင့် HDR ကိုနှစ်ဦးစလုံး၏ display ကိုထိန်းချုပ်ယူဝန်ဆောင်မှုပေး enable လုပ်ဖို့ကို real-time အသိဉာဏ်သေံမြေပုံ algorithms အသုံးပြုသည်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်မဟုတ်ဘဲစားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်၏အပြုအမူန်းကျင်အလုပ်လုပ်ခြင်းထက်, မခွဲခြားဘဲအကြောင်းအရာအမျိုးအစား, အတွေ့အကြုံ၏အရည်အသွေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဝန်ဆောင်မှုပေးအာဏာ။
MediaFirst Encoding တိုက်ရိုက်နှင့် SDR / HDR ကိုကူးပြောင်းနည်းပညာကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် NewBay မီဒီယာအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်း်ထမ်းဆောင်အတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, အင်္ဂါရပ်ထား, ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များသတ်မှတ်ချက်အပေါ်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး panel ကိုစစ်ကြောစီရင်ရမည်ထားတဲ့ဆု၎င်း၏ '' Show ကိုအကောင်းဆုံး '' ။
အဆိုပါ NewBay မီဒီယာ panel ကိုလည်းပေးအပ် Ericsson က တစ်စက္ကန့်နှင့်အတူမီဒီယာ Solutions ''အကောင်းဆုံး ယင်း၏ MediaFirst အကြောင်းအရာထုတ်ယူခြင်းဖြေရှင်းချက်များနှင့်အလှူငွေ application များအတွက် MPEG H ကို၎င်း၏ထူးခြားသောအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပြရန် '' ဆုချီးမြှင့်၏။
MediaFirst အကြောင်းအရာထုတ်ယူခြင်းတစ်ဘုံဟာ Off အဆိုပါစင် (COTS) ပလက်ဖောင်းနဲ့ cloud-based network ပေါ်မှာကွဲပြားခြားနားသောအပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်စွမ်းရည်ကိုများစွာသောလူကိုဖန်တီးရန်အော်ပရေတာဖွတဲ့ software နှင့်လျှောက်လွှာ-based ဒီဇိုင်းကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ Fraunhofer IIS နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. MPEG H ကို၎င်း၏ထူးခြားသောအကောင်အထည်ဖော်ရေး, အလှူငွေ application များအတွက်စားသုံးသူအတှေ့အကွုံကိုပိုမိုစွဲငြိဖွယ်ရာအသံစွမ်းရည်ပို့နဲ့ TV ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဘို့န်ဆောင်မှုများကွာခြားခြင်းဖြင့်ပင်ထပ်မံတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
တိုင်းပြသမှာ, NAB ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်းထူးချွန်, ခြုံငုံဧည့်သည်အတွေ့အကြုံ, ကုန်ပစ္စည်းတင်ပြချက်များနှင့်တစ်ခု Awesome ကို Cool ပြကွက် (ACE အား) ဆုနှင့်အတူတဲတည်ဆောက်၏အရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဒီနှစ်, Ericsson က မီဒီယာ Solutions '' အကောင်းဆုံးအကြီးစားကျွန်း Booth '' များအတွက် NAB ACE အားဆုချီးမြှင့်ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့ကကိုယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အစုစုနှင့်အတူ pack ကိုဦးဆောင်ကြသည်မဟုတ်, ဒီ ACE အားဆုချီးမြှင့်လည်းငါတို့ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုကနေကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အကျိုးစီးပွားတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုစုကိုစာပို့ဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ နှင့် NAB ပြရန် 1,700 ပြသခဲ့သည်ကျော် featuring, ကပြတဲအဘို့ဤဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများကိုလက်ခံရရှိရန်အမှန်တကယ်ဂုဏ်အသရေရဲ့နောက်ထပ်တီဗီနှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အနှံ့ရုပ်မြင်သံကြားအသွင်ပြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ရှင်ထောက်ခံ, "Bhikshesvaran ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
platformcomms အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Grass Valley သည်“ GVX” ဖောက်သည်ကောင်စီကိုစတင်ခဲ့သည် - ဇွန်လ 1, 2020
A1now သည်ကိုယ်ပိုင်ကြည့်ရှုရန်အကြံပြုချက်များအတွက် Vionlabs ၏ AI-powered solution ကိုရွေးချယ်သည် - ဇွန်လ 1, 2020
LTN Global သည် LTN Wave ကိုလွှတ်တင်သည်။ ဂြိုလ်တုဖြန့်ဝေခြင်းအတွက်အိုင်ပီအခြေပြုအခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည် - မေလ 28, 2020
(Awesome ကို Cool ပြပွဲ) ဆုချီးမြှင့် 2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ဆုချီးမြှင့်ကိုအနိုင်ပေး ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော မီဒီယာ MediaFirst Encoding တိုက်ရိုက် NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် NAB16 nabshow streaming မီဒီယာ 2018-04-30
ယခင်: မရတဲ့ထုတ်လုပ်မှု International (ရုံးနှင့်သတ်မှတ်ချက်အပေါ်) - အချိန်ပြည့်
နောက်တစ်ခု: Lynx Technik အရောင်းရေးအဖွဲ့အပြင်ကြေညာ
FreeFly MoVi Pro အော်ပရေတာ